सफ्टवेयर र कार्यक्रमहरू - Ikkaro
सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गरौं। कसरी गर्ने र कसरी समस्याहरू समाधान गर्ने। विन्डोजमा समस्या, लिनक्समा। जिम्प ट्यूटोरियल र अन्य उपकरणहरू जस्तै भर्चुअल मेशिनहरू, इत्यादि।
हामी प्रत्येक दिन अपरेटिंग प्रणाली र कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्दछौं। धेरै चोटि समस्याहरू खडा हुन्छन् कि हामी कसरी समाधान गर्ने जान्दैनौं र अन्य समयमा हामी आफैंलाई उत्पन्न गर्दछौं चीजहरू सही तरीकाले नगरी।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कम्प्युटरलाई आफ्नो काममा प्रयोग गर्नुभयो, के तपाईंले सही प्रदर्शन पाउनुहुन्छ? तपाईंसँग अप्टिमाइजेसन प्रक्रियाहरू छन् वा तपाईं अधिक धेरै स्वचालित गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि त्यहाँ उपकरणहरू छन् जसले तपाईंलाई उत्पादकता बढाउन अनुमति दिन्छ, वा तिनीहरूमा केही परिवर्तन गर्दछ वा तपाईंले यसलाई प्रबन्धन गर्ने तरिका।
ठिक छ, हामी यी सबै प्रकारका चीजहरूका लागि ट्रिकहरू र ट्यूटोरियलहरू हेर्न जाँदैछौं।
TOR को साथ हामीले चाहेको देशको आईपीसँग कसरी नेभिगेट गर्ने
कहिलेकाँही हामी नेभिगेट गर्न चाहान्छौं कि हामी कुनै खास देश मा छौं भन्ने छ, अर्थात्, हाम्रो वास्तविक आईपी लुकाइरहेको छ र हामीले छनौट गरेको देशबाट अर्को प्रयोग गरेर।
हामी धेरै कारणले यो गर्न चाहन्छौं:
अज्ञात रूपमा ब्राउज गर्नुहोस्,
सेवाहरू मात्र प्रदान गरिन्छ यदि तपाईं निश्चित देशबाट नेभिगेट गर्नुहुन्छ भने,
सेवाहरू भाडामा लिँदा प्रदान गर्दछ,
जियोलोकेटेड एलिमेन्ट भएको एक वेबसाइटले कसरी कार्य गर्दछ जाँच गर्नुहोस्।
मेरो मामला मा यो अन्तिम विकल्प थियो। एक WordPress वेबसाइटमा धेरै प्लगइनहरू लागू गरेपछि, मैले यो जाँच गर्न आवश्यक भयो कि यसले डाटा प्रत्येक देशका प्रयोगकर्ताहरूलाई सही तरीकाले प्रदर्शन गर्दछ।
मेरो शहरमा मौसमविद् वेधशालाले प्रस्ताव गरेको ऐतिहासिक तथ्या .्कलाई हेर्दा, म यो देख्छु तिनीहरू केवल ग्राफिक रूपमा र PDF को रूपमा डाउनलोडको लागि प्रस्ताव गर्दछन्। म बुझ्दिन किन तिनीहरूले तपाईंलाई csv मा डाउनलोड गर्न नदिनुहोस्, जुन सबैका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ।
त्यसैले म एउटा खोज्दै छु यी टेबल्सहरूलाई pdf बाट csv मा पास गर्न समाधान गर्नुहोस् वा यदि कोही एक्सेल वा लिबर अफिस ढाँचा गर्न चाहन्छ भने। मलाई csv मनपर्दछ किनकि csv को साथ तपाई जे पनि गर्नुहुन्छ जुन तपाई यसलाई अजगर र यसको पुस्तकालयहरु संग सम्हाल्न सक्नुहुन्छ वा तपाई सजिलैसँग कुनै स्प्रेडसिटमा आयात गर्न सक्नुहुनेछ।
जस्तो कि एक स्वचालित प्रक्रिया प्राप्त गर्ने विचार हो, म चाहान्छु कि स्क्रिप्ट पाइथनसँग कार्य गर्दछ र यहीँ ट्याब्ला भित्र आउँदछ।
कसरी थोप्लाहरू वा एस्ट्रिक्सको साथ लुकाइएको पासवर्ड हेर्न
पक्कै कहिले तपाईले पासवर्ड बिर्सनुभयो तर तपाईको ब्राउजरले यसलाई याद राख्दछ यद्यपि यो डट्स वा एस्ट्रिक्सको साथ लुकाइएको छ र अन्त मा तपाईं यसलाई परिवर्तन समाप्त। ठीक छ, त्यहाँ यो पासवर्डहरू हेर्न धेरै विधिहरू छन्, मलाई दुईजना थाहा छ, हाम्रो ब्राउजरको प्राथमिकताहरूमा जानुहोस् यसले पासवर्ड कहाँ बचत गर्दछ र दोस्रो भनेको यो हो कि हामीले सिकाउने विधि, धेरै सरल र बढी शक्तिशाली छ किनकि यसले अनुमति दिन्छ हामीलाई फिल्ड्समा सेभ भएका पासवर्डहरू हेर्नका लागि, भनेको चाहिं यो हो कि यदि हामीले उनीहरूलाई सेभ गरेका छैनौं र वास्तवमा यो हाम्रो ब्राउजरमा छैन, हामी त्यसलाई देख्न सक्छौं।
उदाहरणका लागि यो धेरै उपयोगी छ तपाईं टोलीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र कसैले फर्ममा एपीआई राख्दछ, वर्डप्रेसमा जस्तै, तपाईं यसलाई छिटो पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कहिँ फेरि प्रयोग गर्न।
म तपाइँलाई यो कसरी गर्ने भनेर सिकाएर भिडियो छोड्छु र तल म परम्परागत ढाँचामा दुई तरिकाहरू बुझाउँछु (इन्स्पेक्टर र ब्राउजर पासवर्ड प्रबन्धक)
जिम्पको साथ ब्याचहरू वा ब्याचमा (बल्कमा) छविहरू कसरी सम्पादन गर्ने
प्रयोग गर्नुहोस् फोटो र छवि सम्पादकको रूपमा जिम्प। मैले केहि बर्षमा फोटोशप छोएको छैन। जब म विन्डोज प्रयोग गरिरहेको थिएँ पनि मैले फोटोशप प्रयोग गर्न छाडे किनभने म यसलाई ह्याक गर्न चाहन्न।
छविहरू बल्कमा, बल्कमा, ब्याचेस वा बल्कमा परिमार्जन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् जुन हामी यसलाई कल गर्न चाहन्छौं। तर यो जिम्प विस्तार मेरो लागि अपरिहार्य देखिन्छ। हामीलाई अनुमति दिन्छ छविहरू मापन गर्नुहोस्, वाटरमार्कहरू थप्नुहोस्, तिनीहरूलाई घुमाउनुहोस्, ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्, तौल घटाउनुहोस् र अन्य धेरै कार्यहरू जुन हामी विशाल तरिकामा गर्छौं र धेरै छोटो समयमा। तपाईं बचत गर्न लाग्नु भएको समयको मात्रामा विश्वास गर्नुहुन्न।
म यसलाई प्रायः ब्लग लेखको छवि सम्पादन गर्न प्रयोग गर्दछु। म तिनीहरूलाई सहि आकार दिन्छु, वाटरमार्क थप्नुहोस्, र सेकेन्डमा तौल घटाउनुहोस्। तर मैले यो वेबमास्टर्स, फोटोग्राफरहरू बाहेक धेरै व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी भएको पाउँदछु जो वाटरमार्कहरू थप्न चाहान्छन्। वा यदि तपाईं एकै समयमा धेरै फोटो वा छविहरूको आकार परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ
म तपाईंलाई पहिले यो छोडेर जान्छु र त्यसो भए तपाईं यसलाई रुचि राख्नु भएमा यसलाई कसरी स्थापना गर्ने भनेर।